Ungahamba njani eTurkey? Ezothutho eTurkey- ALinks
Abemi baseTurkey abaze babonakale bengenazo iindlela zothutho lomhlaba omkhulu njengeTurkey, ukusuka kwincam yaseGrisi ukuya eSyria, ukusuka eBulgaria ukuya eIran naseIraq ukuya eGeorgia naseArmenia.
Ewe uluhlu lwazo lwezothutho, ukusuka kwiibhasi kunye neebhayisikile ukuya koololiwe, iimoto eziqeshisayo, kunye nolwandle olunezinto ezintle, yenye yezona zinto zibalaseleyo ngeTurkey kumhambi. Nantsi into ekufuneka uyazi malunga nokujikeleza kweTurkey.
Kulula kakhulu ukubhabha uye eTurkey, kodwa lilizwe elikhulu (iimephu). Ndiqaphele imigama kunye namaxesha okuhamba kuzo zonke iindawo ezinkulu nezindawo ezincinci, zombini kwiikhilomitha nakwiimayile.
Okuninzi iindlela ezisetyenzisiweyo zothutho eTurkey zezi:
Oololiwe kunye neeTram
I-Turkey, lelinye lawona mazwe makhulu emhlabeni. Inika uthungelwano olubanzi nolubanzi lokuhamba.
I-Turkey yenye yezona ndawo zintle zokubona indawo. Ewe, ikwabonelela enye yezona ndlela zokuhamba ezifanelekileyo. Unokonwabela uluhlu olubanzi lwezothutho eTurkey. Izothutho ziyahluka ngebhasi, kwiimoto eziqeshisayo, iibhayisikile ukuya elunxwemeni lolwandle. Nazi zonke izinto ekufuneka uyazi malunga nokujikeleza iTurkey.
Ungahamba njani eTurkey?
“Ukurentisa imoto eTurkey? Uyaphambana! ” Yeyona mpendulo iqhelekileyo iya kufunyanwa ngabantu sele beyizamile.
Xa unemithambo ezele yintsimbi, umhadi ongenasiphelo womonde, kunye nepenant yokuhlaba umkhosi uphondo. Ngokuqinisekileyo, emva koko ukuqhuba eTurkey kuya kuba ngamava amnandi. Kodwa, ukuba ukhetha okonwabela, kufuneka ugcine izinto ezithile engqondweni uqhuba ngokhuseleko. Ukusetyenziswa okungaqhelekanga komqondiso wokujika kunokuthetha ngokuchasene ngokupheleleyo noko ucinga ukuba akwenzayo. Kodwa, ukuba unomnqweno wokuhamba naphi na emotweni kufuneka ulandele eyakho.
Ukuqesha imoto kulula xa nje uneendlela zesazisi, ezinjengepasipoti kunye nelayisensi yokuqhuba. Uninzi lwabahambi abasuka eYurophu naseMntla Melika banokusebenzisa iilayisensi zabo zokuqhuba. Abadingi ukuqhuba kwilizwe liphela. Kodwa, kuhlala kungcono ukujonga kwinkampani yakho yokuqeshisa ngaphambi kwexesha ukuze uqiniseke.
I-Turkey Auto Rental / amaxabiso okuqesha
Imirhumo yokuqesha rhoqo iyahluka ukusuka kwi-TL120 ukuya kwi-TL180 nangaphezulu (kubandakanya i-inshurensi), kodwa kunokubakho iintlawulo ezongezelelweyo.
I-Fuel ikwayinxalenye ebalulekileyo yeendleko zakho (TL24 + ngegaloni nganye yase-US):
Iindleko zepetroli zeemoto eziqeshisayo nge-km (malunga)
Ilitha e-1 (i-95-octane engenayo ipetroli / ipetroli) kurşunsuz benzin: TL6.30
(Ilitha enye ye-US = 1 iilitha)
(1 Imperial gallon evela e-UK = 4.546 iilitha)
(@ 12 km / ilitha) 100 km (62.14 yeemayile): TL533
(Ukukhwela ibhasi kwi-100 km: TL14)
(Injini yedizili ye-Euro (idizili) ilitha enye: TL1)
Ngokuqesha imoto ebaleka kwi-diesel ye-Euro (i-diesel ye-ultra-low-sulphur), uya kuba nakho ukunciphisa iindleko zakho kakhulu kuba ezi moto zinokusebenza ngakumbi kuneemoto zepetroli.
Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lokuhamba lomntu ngamnye ku…
TL150 ukuya TL200
TL200 ukuya TL350
Kuyonga ukuqesha imoto ukuba uhamba no…
Abantu aba-3 okanye aba-4
Abantu aba-2 okanye aba-3
Umntu omnye okanye nangaphezulu
Ngokubanzi, kubiza kakhulu kwaye kulula ngakumbi ukuhamba umgama omde (ngaphezulu kwe-800 km / 500 yeekhilomitha) nge moya, ibhasi or uloliwe.
Oololiwe abadume kangako eTurkey. Uninzi lwabahambi kunye nomhlali ophakathi abahambi ngoololiwe. Kwakhona, iinethiwekhi ezisebenza esixekweni zibanzi kakhulu. Kodwa, izixeko ezinje ngeIzmir, Istanbul, kunye neAnkara sele kumbovu ukuba zenze uhlengahlengiso olukhulu.
Zininzi iiprojekthi zesantya esiphezulu soololiwe, ezinjenge-Ankara-Sivas, Ankara-Bursa, kunye ne-Ankara-Izmir. Zonke ezi projekthi kuthiwa zisebenza ngokupheleleyo ngo-2023.
Ukuhamba ngeeNdleko zoLoliwe
Itikiti lendlela yokuya / kwitikiti elinye kuphela phakathi kweedolophu ezinkulu inokukuxabisa.
Kwiindawo ezili-10 ukuya kwezili-12 zokuhamba ngesihlalo sePullman kumntu omnye omdala, uhambo oluya kwelinye kuphela ukusuka kwi-TL40 (engatshatanga). (I-TL55 isenokuba yimali efanayo yokuhamba ngebhasi.)
I-TL70 kwindlela enye (engatshatanga) yokuhamba kwabantu abadala kuloliwe onesantya esiphezulu phakathi kwe-Ankara neIstanbul.
Umkhweli kwigumbi lokulala koololiwe oololiwe u-TL67 ukuya kwi-TL93 (TL92 ukuya kwi-TL118 kumhambi omnye kwigumbi lokulala elinendawo ezimbini)
Yikhumbule into yokuba abakhweli abaneminyaka engama-60 okanye ngaphezulu banelungelo lokufumana isaphulelo sama-20 eepesenti kuloliwe kwindlela nganye / yohambo olunye (kodwa hayi iindleko zemoto elele).
Uhambo olujikelezayo / lokubuya yi-20% isaphulelo, kodwa kuba sisinye kuphela isaphulelo esisebenzayo, akukho saphulelo.
Izithuthuthu zezinye zeendlela ezilungileyo zokujonga ubuhle bendalo. Izithuthuthu ziyaziwa nangokonwaba. Izithuthuthu kunye nezithuthuthu zezona zithandwa kakhulu ngabahambi abancinci nabahambi. Ngamaxabiso athile zitshiphu kwaye kulula ukurenta. Indawo ethandwayo yokuqasha isithuthuthu sombane. Ukuhambahamba esixekweni ngebhayisekile nako kuyabiza kwaye kuyafikeleleka. Le ndlela yokuhamba iba yenye yeendlela eziphambili zothutho lweTurks.
Ukubhabha ukuya nokujikeleza iTurkey
Iinqwelo moya zaseTurkey zezona zona zineemveliso eziPhambili zoShishino kwihlabathi. Kukwanokugqwesa kuqoqosho, ukubhabha phantse kuyo yonke indawo. Le moya inikezela ngezixhobo ezahlukeneyo ezizezinye ezinye iinqwelomoya. Konke kuqala ngamaxabiso esivumelwano ngelixa uthatha inxaxheba kwezona manyano zibalaseleyo nezona zibalaseleyo kwihlabathi liphela. Le moya inika uluhlu olubanzi lweenqwelo moya ezilingana nohlahlo-lwabiwo mali kunye neshedyuli. I-Turkey yindawo elula kakhulu yokuhamba ngenqwelomoya. Nkqu nabantu baseTurkey, ngokwesiko abakhetha ukuhamba ngendlela, ngoku banomdla wokubhabha ngakumbi. Isizathu solu tshintsho sicacile njengoko inqwelomoya ithatha ixesha elingaphantsi kweshumi lokuhamba. Ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka eIzmir ukuya eIstanbul kuthatha iyure enye, xa kuthelekiswa nokuhamba ngebhasi okunokuthatha ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10. Kukho ilizwi elihle kakhulu elithi "Ixesha liyimali", kwaye namhlanje wonke umntu ufuna ukugcina ixesha lakhe.
Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neendleko zeenqwelomoya eTurkey
Into yokuqala yokwazi: iya kubiza ngaphezulu, mhlawumbi iphindwe kabini kunaleyo, ukuba uthengela itikiti lenqwelomoya yenqwelomoya yasekhaya kwiarhente yokuhamba engaphandle kweTurkey! Njengokuba uza kuyithenga ngelixa ubuseTurkey, okanye kwiarhente yokuhamba okanye umthengisi wetikiti eTurkey.
Kufuneka wenze ntoni ngaphambi kokuba ufike eTurkey ukuba ufuna ukuthenga amatikiti enqwelomoya wasekhaya? Elula: thenga itikiti lakho eTurkey ngearhente yokuhamba!
Unokuthenga kwangaphambili itikiti lakho, uhlawule ngekhadi letyala kwaye ufumane itikiti nge-imeyile.
Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lokuhamba lomntu ngamnye ku… Cinga ukubhabha ukuba umgama ungaphezulu kwe…
€ 30 ukuya kwi-€ 60 Iikhilomitha ezili-750 (1200 km)
€ 60 ukuya kwi-€ 100 Iikhilomitha ezili-500 (800 km)
€ 100 + Iikhilomitha ezili-200 (300 km)
Iiferi kunye neenqanawa
Iiferi yenye indlela eqhelekileyo yezothutho, ngakumbi kwi-Istanbul nakwiindawo ezikufutshane, ngeBosphorus, ngaphakathi nase-Izmir, kunye naseBodrum naseMarmaris iiholide eTurkey zisiya kwiziqithi zaseGrisi. Njengoko banokutshintsha, kuya kufuneka ufunde iindleko kunye nokuhamba rhoqo kweenkonzo. Kwakhona, le ndlela yokuhamba ayibizi kwiindlela eziphambili ezinikezelwa eIstanbul, ngelixa uhambo losuku oluya kwiiItrike Islands lubalimalunga ne-EUR 35.
Inqanawa yolwandle yinto entsha ehambelana nemarike yezothutho. Inqanawa yolwandle, eyabucala, ibhabha abahambi ukusuka eIstanbul ukuya kwimimandla eselunxwemeni. Inkampani ekukuphela kwayo enelayisensi eqhuba le nkonzo yi-Seabird Airlines, kwaye amaxabiso aphezulu kakhulu xa kuthelekiswa nokuhamba rhoqo ngebhasi nangololiwe. Iyafikelela, nangona kunjalo, ifikelela kwi-85% yokuhamba ngenqwelomoya kunye nezicwangciso zokwandisa ukusebenza kwayo ukusuka eIstanbul ukuya eAnkara. Ukuba uthanda ukhetho lwezothutho olwahlukileyo kunye nembono epholileyo yamava omnye, kutheni ungahambi ngolwandle? Inqanawa yolwandle yinto entsha ehambelana nemarike yezothutho. Inqanawa yolwandle, eyabucala, ibhabha abahambi ukusuka eIstanbul ukuya kwimimandla eselunxwemeni. Inkampani ekukuphela kwayo enelayisensi eqhuba le nkonzo yi-Seabird Airlines, kwaye amaxabiso aphezulu kakhulu xa kuthelekiswa nokuhamba rhoqo ngebhasi nangololiwe. Iyafikelela, nangona kunjalo, ifikelela kwi-85% yokuhamba ngenqwelomoya kunye nezicwangciso zokwandisa ukusebenza kwayo ukusuka eIstanbul ukuya eAnkara. Ukuba uthanda ukhetho lwezothutho olwahlukileyo kunye nembono epholileyo yamava omnye, kutheni ungahambi ngolwandle?
Kuya kufuneka uthenge i-billet yakho (yokupasa) kwivenkilana ezikhethekileyo zetikiti kwangaphambi kweebhasi ezininzi zedolophu. Ezona ndawo ziphambili zebhasi kunye neendawo zokudlulisa, iivenkile zikhona, kwaye zihlala ziqhotyoshelwe kwiivenkile ezikufutshane neebhasi. Ngokwesiqhelo, imali yokuhamba imalunga ne-2.
Rhoqo iibhasi zabucala zibaleka kwiindlela ezifanayo neebhasi zedolophu; ngokwesiqhelo badala kwaye bamkela kuphela imali okanye amatikiti.
Iindleko zokuhamba ngebhasi eTurkey
Ukuhamba eTurkey ngendleko ezifanelekileyo, zebhasi zale mihla malunga ne-TL8 nge-100 km (62 yeekhilomitha).
Iibhasi zeedolophu eziphakathi esixekweni ziyahluka ngokwendlela yokusebenza, indlela, kwaye, kwezinye iimeko, ixesha losuku okanye usuku lweveki, izixhobo ezisetyenzisiweyo (iibhasi ezinobunewunewu ngakumbi zinokubiza ngaphezulu).
Izaphulelo zikwabonelelwa ngohambo lokuya / lokubuya, lwabantwana, lweentengiso ezizodwa, kunye neetikiti ezithengiweyo kwiwebhusayithi yenkampani yebhasi.
IiDolmuşes ziibhasi ezincinci okanye, amaxesha amaninzi, zithatha ii-dolmuşes (iiteksi ekwabelwana ngazo) ezihamba ngaphakathi kwesixeko kwiindlela ezizinzileyo. Ngokwesiqhelo, ziyakhawuleza, zilunge ngakumbi, kwaye zibiza nje kancinci kunebhasi. Ukuma kweDolmuş kubhalwe imiqondiso kwizixeko ezikhulu; jonga u-'D 'kunye nokubhalwa kwesicatshulwa' iDolmuşndirme Bindirme Yeri '(iDolmuş Boarding kunye neAlighting Place). Kufutshane nezikwere ezinkulu, izikhululo zeenqwelo moya, kunye neziphambuka, indawo zokumisa zihlala zikwindawo efanelekileyo. Kufutshane nezikwere ezinkulu, izikhululo zeenqwelo moya, kunye neziphambuka, indawo zokumisa zihlala zikwindawo efanelekileyo.
Izixeko ezininzi, ezinje ngeIstanbul, iZamir, iBursa, kunye neAnkara, zineemetro zangaphantsi komhlaba. Ezi zihlala zikhawuleza kwaye kulula ukuzisebenzisa, kodwa ukuze ufumane imephu yendlela, kuya kufuneka uhambe kwimithintelo yetikiti. Uninzi lweemetro zifuna ukuba uthenge kwaye ufake i-jeton (ithokheni yothutho; malunga ne-2) kumqobo wetikiti.
Iidolophu ezininzi zinemizila yeetramu (trams), ekhawulezayo nesebenzayo indlela yokuhamba, kwaye ibiza kuphela malunga ne-2 T ukuyisebenzisa.
E-Turkey, yeyiphi eyona ndlela ikhawulezayo yokuhamba?
Ibhasi, imoto eqeshisayo, uloliwe, okanye inqwelomoya?
Ezi zibikezelo zikwiLira yaseTurkey. (IiRhafu zoTshintshiselwano).
Umzila Km ibhasi imoto* Qeqesha‡ Isicwangciso†
Istanbul-Efese 600 TL85-95 TL300 TL74‡‡ TL60-275
Istanbul-Ngaphantsi 795 TL100-125 TL398 - TL60-275
Istanbul-Ankara 455 I-TL70-90 TL228 TL70 TL60-350
Istanbul-Kapadokiya 720 TL90-115 TL360 - TL60-350
Efese-Pamukkale 210 TL30-50 TL105 TL15 -
Efese-Antalya 400 TL55-60 TL200 - TL165-500
Pamukkale-Kapadokiya 610 TL65-80 TL305 - TL220-500
Antalya-Kapadokiya 530 TL70-90 TL265 - TL80-500
umthombo: ukuhambahamba kakuhle
Ungasifaka njani isicelo sokufumana indawo yokhuseleko eArgentina?
Amazwe asimahla eVisa eNorway
Ukucwangcisa uhambo oluya eVenezuela, nantsi isikhokelo sohlahlo-lwabiwo mali !!!
Novemba 21, 2021
IVisa yasimahla kumazwe aseAlbania
Luya kuxabisa malini uhambo oluya eNigeria?
Disemba 6, 2019